लामो समय कुर्सीमा बसे हुन्छ यस्ता समस्या, के हुन् उपाय? – Health Post Nepal
डा. अजय महतो
२०७८ असोज ३० गते ८:५२
हिजोआज युवा अवस्थामै कम्मर दुख्ने, ढाँड दुख्ने समस्या लिएर अस्पताल धाउने संख्या बढ्दै गएको छ। विराट मेडिकल कलेज टिचिङ अस्पतालमा कम्मर दुख्ने समस्या लिएर ४० प्रतिशत युवा आउने गरेका छन्।
कुर्सीमा बसेर काम गर्ने सँगसँगै घरमा एकोहोरो काम गर्ने महिलामा पनि यस्ता खालका समस्या बढि नै देखिन थालेको छ।
ढाँडको समस्या बोकेर झण्डै ९० प्रतिशत मानिस अस्पताल धाउने गरेका छन्, जसमध्ये ५० प्रतिशत ५० वर्ष नाघिसकेका वृद्ध छन् भने ४० प्रतिशत युवा रहेका छन्।
यही ४० प्रतिशत युवा वर्गमा पनि ७० प्रतिशत घरमा काम गर्ने महिला र ३० प्रतिशतल अफिसमा काम गर्ने मानिसको संख्या रहेको छ।
कार्यालय गएर कुर्सीमा लामो समय बसेर कार्य गर्ने समुह निकै बढेको छ। शरीरिक अभ्यास कम गर्ने भएका कारण भविष्यमा ढाँडको समस्या हुने व्यक्तिको संख्या अझै बढ्दै जाने अनुमान गरिएको छ।
लामो समय कुुर्सीमा बसेर काम गर्ने व्यक्तिलाई कसरी हुन्छ ढाँड तथा कम्मरको समस्या?
विराट मेडिकल कलेज टिचिङ अस्पतालमा कार्यरत अर्थोपेडिक सर्जन डा. अजय महतोसँग हेल्थपोष्टकर्मीले गरेको कुराकानीमा आधारित रही यो लेख तयार गरिएको हो।
हाम्रो गर्धन, ढाँड र कम्मरसम्म एउटै हड्डी हुन्छ, जसलाई स्पाइन भनिन्छ। यो तीन प्रकारको हुन्छ, गर्धनमा रहेको हड्डीलाई सर्भाइकल, ढाँडमा रहेको हड्डीलाई थोरासिक, र कम्मर भन्दा मुनीतिरको हड्डीलाई लुम्बर भनिन्छ।
हाम्रो शरीरको बनावट जनावर भन्दा फरक छ। हाम्रो शरीरको बनावट उभिएर बस्न सक्ने खालको छ, जसको कारण हामी मज्जाले उभिन तथा बस्न पनि सक्छौं। स्पाइनको हड्डीले हाम्रो बस्ने आसनलाई मिलाएर राख्छ।
स्पाइनको बनावट घाँटीतिरको हड्डी अगाडितिर आउँछ भने दाँडको अलि बाहिर निस्केको र कम्मरतिरको हड्डी भित्रतिर गएको हुन्छ। यसलाई हेर्दा धनुषको जस्तो बनावट हुन्छ।
त्यसैले हामी बस्दा सिधा भएर बस्नुपर्छ, जसले गर्दा हड्डीहरु बनावट अनुसार नै मिल्दछ।
तर सामान्यतया, मानिस बस्दा बाँगो परेर बस्ने गर्दछन्। कुुुर्सी, टेबलमा बसेर काम गर्ने वा कपडा बुन्ने मानिस बस्दा आसन मिलाएर बस्दैनन्। काम गर्दा पनि एकोहोरो
निहुरेर, घाँटीलाई निकै निहुराएर काम गर्छन् जसले गर्दा माशंपेशी र स्पाइनको तालमेल मिलेको हुँदैन।
त्यसैले, माशंपेशी बिस्तारै फाँटिदैं जान्छ। धेरै समयसम्म यस्तो भए पछि गएर दुख्न थाल्दछ। युवा अवस्थामै समस्या देखिए यसलाई ‘मेकानिकल ब्याक पेन’ भनिन्छ।
जसरी मेसिनलाई राम्ररी नचलाउँदा आवाज आउने तथा खिइने गर्छ, त्यसरी नै हाम्रो ढाँडको हड्डी वा स्पाइनलाई पनि राम्ररी बसेनौं भने थाक्न र दुख्न थाल्छ। यसमा ठूलो समस्या त हुँदैन तर माशंपेशी र लिगामेन्ट फाटिएर दुख्न थाल्दछ।
तर यो समस्या पछिसम्म यसरी नै भइरहे बिस्तारै हड्डी खिइने, नसा च्यापिने जस्ता समस्या आउन थाल्छ। यो समस्या एकैचोटी हुँदैन। निकै समय लाग्छ। युवा अवस्थामा सुरु भएको समस्या वृद्धा अवस्थामा गएर देखिन्छ।
हाल यस्तो समस्या कुर्सी निकै लामो समयसम्म बसेर काम गर्ने, फ्याक्ट्रीमा काम गर्ने, उभिएर तथा निहुरिएर काम गर्नुपर्नेहरुलाई यस्तो समस्या देखिन थालेको छ।
समयमै मानिसले आफ्नो बस्ने पोजिसन (आसन)लाई मिलायो तथा माशंपेशीको व्यायाम गर्‍यो भने यो समस्या विस्तारै निको भएर जान्छ। आफ्नो काम अनुसार आफ्नो शरीर तथा माशंपेशीलाई बलियो बनाउनु पर्छ। त्यसको लागि सहि पोस्चरमा बसेर काम गर्नुपर्छ।
ढाँड दुख्नु कुनै रोग वा समस्या होइन। शरीरलाई राख्नुपर्ने आसनमा नराखी विपरीत आसनमा बस्दा हड्डी थाक्ने गरेको छ। यसलाई असामान्य बानी भनिन्छ, सोही अनुसार माशंपेशी पनि असामान्य रुपमा बस्दछ।
जो व्यक्ति सहि तरिकाले बस्छ, दैनिक व्यायाम गर्छ, स्पाइनको व्यायाम गर्छ, उनीहरुलाई यस्तो खाले समस्या कमै मात्र आउँछ।
जसले आसन नमिलाई बस्छ, उनीहरुलाई पछि गएर ढाँड दुख्न थाल्दछ। आफ्नो आसनलाई ध्यान दिएर बसे एक देखि दुई हप्तामा माशंपेशी मिलेर आउन थाल्छ, र सँधै मिलाएर बसे पुन दुखाई फर्केर आउने सम्भावना हुँदैन।
धेरै नै ढाँड वा कम्मर दुखे के गर्ने?
धेरै दुखाई हुने व्यक्तिले सुरुमा बाँगो परेर बस्ने आसन छोड्नुपर्छ। यसको उपाय भनेकै सिधा बस्नु हो। धेरै दुखेर काम गर्न नसक्ने अवस्था आयो भने पाँच देखि सात दिनसम्म काम छोडेर आराम गर्नुपर्छ। यसको लागि बेड रेस्ट नै अनिवार्य हुन्छ।
त्यस्तै, घरमा बसेर मनतातो पानीले दुखेको ठाउँमा सेक्ने, माशंपेशीलाई आराम दिन नदुख्ने औषधी (पेन किलर) खाने तथा मालिस गर्ने मलमले मालिस गर्नुपर्छ।
तर बेड रेस्ट गर्दा पनि आराम भएन, वा दुखाई कम भएन भने हाडजोर्नीको सर्जन वा विशेषज्ञलाई भेटेर सल्लाह लिनुपर्छ। नदुख्ने औषधीले निको नभए चिकित्सकले हेरेर आवश्यक औषधी दिन सक्छ।
जब यो दुखाई कम हुन थाल्छ, तबदेखि आसन मिलाएर बस्ने तथा दैनिक पाँच मिनेट स्पाइनको व्यायाम गर्नुपर्छ।
हिजोआज युट्युबमा विभिन्न खालका व्यायामका भिडियो आउँछन्, त्यसमध्य ‘स्पाइन एक्सटेन्सन एक्सरसाइज’ गर्नुपर्छ। यो व्यायाम गर्दा कम्मर, ढाँड तथा गर्धन सबैको माशंपेशी बलियो बनाउन मद्धत गर्छ।
त्यस्तै, युट्युबमा ‘आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज’ पनि पाइन्छ, जसले स्पाइनको सबै भागलाई व्यायाम गराउँछ।
दैनिक पाँच मिनेटको व्यायामले दिनभरी कुर्सीमा बसेर काम गर्नेलाई पनि फाइदा पु¥याउँछ भने दैनिक व्यायाम गर्दा पुन समस्या फर्केर आउँदैन।
धेरै लामो समय कुुर्सीमा बसेर काम गर्नुपर्ने भए एक देखि दुई घण्टामा बे्रक दिइराख्नुपर्छ भने सकेसम्म आसन मिलाएर बस्नुपर्छ। आसन मिलाएर बस्ने बानी भए पछिसम्म दिमागमा रहिरहन्छ।
सबै व्यक्तिलाई व्यायाम अनिवार्य छ। समस्या भइरहे चिकित्सकसँग सल्लाह लिनुपर्छ। सबै उपाय अपनाउँदा पनि दुखाई कम नभए अन्य समस्या हो भनेर शंका गर्न सकिन्छ।
डा. महतो हाडजोर्नी तथा नसा सम्बन्धि विशेषज्ञ हुन्।